Taageerayaasha Real Madrid oo go’aamiyay aragtidooda kaga aadan kiiska kabtanka kooxdooda ee Sergio Ramos – Gool FM
Taageerayaasha Real Madrid oo go’aamiyay aragtidooda kaga aadan kiiska kabtanka kooxdooda ee Sergio Ramos
(Madrid) 29 Maajo 2019. Taageerayaasha Real Madrid ayaa go’aamiyay aragtidooda kaga aadan ka tagista Sergio Ramos ee garoonka Santiago Bernabéu iyo saxiixa ay ka doonayaan suuqa kala iibsiga ee xagaaga soo aadan.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa dhawaan sameeyay codeyn si uu u ogaado fikradaha taageerayasha kooxda Real Madrid ee ku aadan ciyaartoyda ay doonayaan inay baxaan iyo kuwa imaanaya.
Natiijada ka soo baxday codeyntan ayaa waxay noqotay in Eden Hazard uu yahay ciyaaryahanka ay taageerayaasha ugu badan ee Real Madrid ay doonayaan inuu yimaado kooxda, waxaana u codeysay 50% ka mid ah, halka 42% ay u codeeyeen da’ayarka reer France ee Kylian Mbappé, Neymar Jr ayaa helay 5%, xili sidoo kale Griezmann uu helay 3%.
Sidoo kale taageerayaasha kooxda Real Madrid waxay aragtidooda ka dhiibteen Xaaladda Sergio Ramos, 54% codbixiyayaasha waxay aaminsan yihiin in daafaca reer Spain uu saxiixi doono heshiis cusub isla markaana uu sii joogi doono garoonka Santiago Bernabéu xili ciyaareedka cusub ee soo socda.
Halka sidoo kale 26% ay filayaan inuu horay u sii socon doono, 16% ayaa aaminsan inuu ku sii joogi doono kooxda heshiiska uu haatan kula jiro, halka 6% ay filayaan inuu baxayo.
Marka loo fiiriyo xiddigaha ay taageerayaasha doonayaan inay baxaan ayaa waxay u kala horeeyaan, 91% waxay doonayaan inuu baxo xiddiga reer Weles ee Gareth Bale, 63% waxay filayaan inuu bixi doono Francisco Isco iyo sidoo kale Lucas Vázquez, iyo sidoo kale 89% ee ah Keylor Navas.
Sidoo kale taageerayaasha Real Madrid ayaa filayaan in 66% xiddiga ree Brazil ee Marcelo uu sii joogi doono kooxda, sidoo kalena laacibka ku guuleystay abaal marinta Ballon d’Or 2018 ee Luka Modrić.
Sadio Mané oo niyadjab ku riday kooxda Real Madrid
Matthijs de Ligt oo qeyb kasoo noqday xiddigaha ay dooneyso Real Madrid, si ay kaga dhigato badalka Ramos